wararka maanta-arlaadii.net » 2017 » December » 11
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho, maalin kaddib markii uu dib ugu soo laabtay, waxaana Madaxweynuhu ku sii jeedaa dalka Turkiga. Madaxweynaha iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Turkiga kaga qeyb galaya shir degdeg ah oo ay...
Maagalada Muqdisho waxaa ka dhacday Xafladda lagu daahfurka qaamuuska doorashooyinka iyo istiraatiijiyadda 5ta Sano ee soo socota. Munaasabaddaan ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiiro, Xildhibaano iyo Wakiilo ka socda BeeshaCaalamka iyo ururada bulshada Rayidka Soomaaliyeed....
Washington oo faah faahisay qorsheheeda weerarada Soomaaliya
War ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in la kordhiyay muddada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ay weerarrada ka fulin karaan Gudaha Soomaaliya. Bishii October ayaa dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in la saxiixay Sharci cusub...
Golaha Shacabka JFS oo Go’aano ka soo saaray arrinta Qudus
Xildhibaanada Baarlamaanka Golaha Shacabka ee Soomaaliya oo hadda kulan ku leh magaalada Muqdisho ayaa si kulul ugu hadlay Xiisadda u dhaxeysa Islaamka iyo Yahuudda ee ka taagan magaalada Barakeysan ee Qudus. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari...
Deg Deg: Wariye Lagu Dilay Muqdisho
Wararka aan ka heleyno xaafadda korobtada ee degmada wadajir ayaa sheegaya in xaafadaasi lagu diley wariye caan ahaa. Wariyaha ayaa ka shaqeynayey Tv ga kalsan xaruntii magaalada muqdisho, wariyaha ayaa lagu magacaabaa maxamed ibraahim gaaboow. Goobjoogayaal ayaa arlaadii.net u...
Duqeymo ka dhacay SHabeelada Hoose
Saraakiisha Ciidamada Dowllada ee ku sugan Degmada Qoryoileey ayaa waxa ay faah faahin ka bixiyeen Howlgallo iyo Duqeyn ka dhacay degaano hoostaga degmadaasi. Taliyaha Ciidamada Dowladda ee degmada Qoryoley ee Gobalka Shabeelada Hoose Cali Maxamed Aadan (Cali Waaq) ayaa sheegay...
Alshabaab oo gawaari ku rarnayd badeeco ganacsi ku gubay Hiiraan
Wararka ka imaanaya Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-shabaab ay dab qabadsiiyeen gawaari ku rarnayd badeeco ganacsi xili ay marayeen deegaano katirsan Gobolka Hiiraan. Maleeshiyada Al-shabaab ayaa gubay ilaa 6 gaari oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed,kuwaasi...
Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay ka doodaan ansixinta Miisaaniyadda Dowladda ee 2018,taasi oo dhawaan Wasaaradda Maaliyadda ay horgeysay Golaha Shacabka. Xildhibaanada Golaha SHacabka ayaa lafilayaa in...